Farmajo: Sharif Xasan dantiisa ayaa kala weyn danta Soomaalida. | KEYDMEDIA ONLINE
Farmajo: Sharif Xasan dantiisa ayaa kala weyn danta Soomaalida.
Muqdisho (Keydmedia) - Maxamed cabdullahi Maxamed Farmaajo rasilwasaaraha xuykuumada KMG Soomaaliya, ayaa waxa uu shaca kaqaaday maanta in hogaamiye kooxeed Shariif Xasan uu u taaganyahayb dantiisa gaarka ah uuna kasoo horjeedo danta malaayiinta Soomaalida ah.
“Dowladaha daneeyaya wanaajinta xaalada Soomaaliya kadib dood dheer waxa ay isku raaceen in hey’adaha dowlada hal sano oo wada jir ah loo kordhiyo, hasa yeeshee waxa ay ku xireen in Soomaalida madaxdeedu ay isla ogolaadaan waxaaana taas hor taagan Shariif Xasan oo doonaya in golaha wasiirada dad uu wato loogu daro hadii kale aan waxba kasoo naasa cadaaneyn hadalka dowladaha dhex dhexadinta wada,” Farmaajo ayaa yiri.
Maxamed cabdullahi Maxamed Farmaajo waxa uu sheegay in Hohaamiye kooxeedka casriga ah uu wali doonayo in uu kursigiisa ku sii fadhiyo dalka xukunkiisana lawareegaan kuwii soo qasayaya labaatankii sano ee tagtay.
Farmaajo ayaa, dhanka kale, waxa uu xaqiijiyay war horay ay u tebisay Keydmedia oo ahaa in kulankii bishaan 12-keeda lagu weday in uu Muqdisho kadhoco dib loo dhigay ilaa dhamaadka bishaan.